कांग्रेस रीत्तीदै , नेकपा भरीदै ! नेपाली कांग्रेसका नेता एकाएक नेकपा प्रवेश , को आए ? – Pradeshi Online
असोज ९ ,
नेपाली कांग्रेसका नेता एव् नेपाल टेलिभिजनका पूर्व अध्यक्ष महेश दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराइमा दाहाल एक कार्यक्रमकाबीच आज नेकपा प्रवेश गरेका हुन् ।
नेपाल लाई शक्तीशाली बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली , शक्तीशाली देशहरु सँग ओलीले गरे यस्तो ..
Lekhnath Budhathoki says:
7 महिनाहरु ago